13 Responses to “ပြည့်ဝအိုး”
ဟုတ်တယ်ဗျနော် လောကမှာ မပြည့်တဲ့ အိုးတွေက လူတွင်ကျယ် ပိုလုပ်ချင်ကြတယ်။ အဲလိုမျိုးတွေ့ရင် ကျနော်ကတော့ ပြုံးမိတတ်တာပါပဲ။
Yeah ....... Most of people r so proud.
By the way, How r u? I know u got fever bec u was very tired with ur computer by writing Very Good short stories. Take Care ur health. Ur health is the most Valuable for ur life.
အဲလို မပြည့်တဲ့အိုးရှိတဲ့ လူမျိုးတွေကိုကြည့်ပြီး သင်ခန်းစာ ယူတတ်ဖို့ လိုမယ်ထင်တယ်နော်....
ကျနော်တို့လို အိုးဗလာတွေကတော့ ဘာမှကို လှုပ်စရာ မရှိဘူးဗျာ။
ကိုဇော်ပြောသလိုပဲ အိုးက ဗလာဖြစ်နေလို့ အခုမှ ဖြည့်မလို့ ကြိုးစားတုန်း တခါတည်း အသံပါ မထွက်အောင် ကျင့်ထားလိုက်ပါမယ်နော်
အိုး ... သိပ်ကောင်းတာပဲရှင်။
I think i need to keep silent next time ... coz till now i'm not the full jar.
ပမာ ဆို မပြည့်အိုး ပြည့်လိမ့်နိုးနဲ့ ဖြည့်ဖြည့်မဲ့သူ မျှော်ဆဲ,နှလုံးသား မှာ စွဲထင်ကျန်မဲ့ စကားလုံး တွေ ဖန်တည်း နိုင်ဖို့ အိပ်မက် လှလှ မက်ပါစေ
အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေကို ကျွန်တော်အပြင်မှာတစ်ကယ်တွေ့ခဲ့ဖူးတယ်....။ ကျွန်တော့်ဌာနက လူကြီးတစ်ယောက်ပါသူကလေ...။ စူပရီတန်းဒန့်စ်ရာထူးပါ....။ သူလေ... လူမရှိရင် ကျွန်တော်တို့ဌာနထဲမှာ ကြမ်းတိုက်တဲ့ တုတ်တံကိုရေဆွတ်ပြီး...ကြမ်းပြင်ကို လိုက်တိုက်နေတော့တာပဲဗျာ....။ ကျွန်တော်က အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့သူ့ကို ဘော့စ်ရယ်..ထားလိုက်ပါ...ပြီးသွားရင် ငါ...အော်ပရေတာတွေကိုခိုင်းပေးပါ့မယ်လို့ ပြောတာတောင်မှ သူက ငါအားနေလို့လုပ်တာ ကိစ္စမရှိပါဘူးတဲ့လေ..ဗျာ...။ ပြုံးပြီးတော့ကိုပြောတာလေ...။ ရှင်းရော....။ ကျွန်တော်လုပ်ရတဲ့ အလုပ်တွေကိုလည်း..၀င်ဝင်ပြီးတော့ကူတတ်တသေးတာ...။
ဒါပေမယ့် ဌာနက တစ်ချို့အော်ပရေတာလေးတွေကျတော့လည်း... အားရင် အဲ့သလိုကြမ်းတိုက်ဖို့နေနေသာသာ ဖုန်းအမ်ပီသရီးလေးတွေကို နားကျပ်နဲ့ နားမှာတပ်ထားပြီး...ဒူးကလေးတွေတစ်နန့်နန့်နဲ့ဗျိုး............ကိုယ်တွေ့ပါဗျား....